တရုတ် Ningnbo Yierka တံဆိပျ - Yueqing, Zhejiang အတွက်အောင်မြင်စွာကျင်းပတရုတ် Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလေကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နျဌာနခှဲ
Yueqing, Zhejiang အတွက်အောင်မြင်စွာကျင်းပတရုတ် Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှလေကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နျဌာနခှဲ
ဒါဟာ7မှဇန်နဝါရီလ 6, 2018 ကနေအဋ္ဌမယေဘုယျအစည်းအဝေးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ၏ pneumatic ဌာနခွဲအဋ္ဌဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာ Yueqing, Zhejiang ခရိုင်တွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်သည်ကိုနားလည်ကြသည်။ အစည်းအဝေး၏ဆောင်ပုဒ်ခဲ့: နယူးခေတ်? နယူးရာသီဥတု? နယူးအရေးယူ။
Cheng Xiaoxia, တရုတ် Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Pneumatic ဌာနခွဲဥက္ကဋ္ဌ, အမျိုးသား Pneumatic ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးစင်တာဒါရိုက်တာ, Lu ကဘို, Pneumatic ဘဏ်ခွဲဒုတိယသမ္မတ, ဝမ် Shaoyu, ဂွမ်ဒေါင်း Zhaoqing ဖန်လေထု Dynamics ကိုဥက္ကဋ္ဌ၏ဒုတိယသမ္မတ Co. , Ltd နှင့်လီ Huaiwen, Ningbo Yadeke Automation စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ General Manager, Ltd Zhang က Lianren, Pneumatic နည်းပညာ Wuxi Institute မှ, Cao Jianbo, Ningbo Fenghua Pneumatic စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Sun က Yonggeng, ကိုယ်စားလှယ်၏လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Zhang က Cuogen, ရှန်ဟိုင်းရှင့်ယိ Pneumatic Components Co. , ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ, Ltd နှင့်အဖွဲ့ဝင်ယူနစ်၏အချိန်ပေါ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ pneumatic ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဌာနခွဲအတွင်းရေးမှူးပါမောက္ခသူ Feng တို့, အာကာသနှင့်လေကြောင်း၏ပါမောက္ခဆင်ဝှာတက္ကသိုလ်, အစည်းအဝေးကျော်သဘာပတိအဖြစ်။
တရုတ် Hydraulic Pneumatic တံဆိပျစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်နှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်တကွ, pneumatic ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နျဌာနခှဲကိုသစ်စာရှိရှိ, အစည်းအရုံး၏ဆောင်းပါးများနှင့်အညီက၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအင်္ဂါအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်၏နိယာမကိုစောင့်ထိန်းခြင်း, ကျက်စား အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးနှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာဖို့အသင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပေးအပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများပြီးဆုံး။ အဆိုပါ pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်န်းကျင်လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်များကို, စက်မှုလုပ်ငန်းသင်ယူမှုဖလှယ်မှု, အလုပ်တစ်စီးရီးလုပ်ဖို့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမြှင့်တင်ရန်:
ကောင်စီ၏ Members'meetings နှင့်အစည်းအဝေးများညာဘက်အချိန်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်နှင့် pneumatic နည်းပညာဖလှယ်မှုလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်လိမ့်မည် တစ်ချိန်တည်းမှာဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ 2014 ခုနှစ်တွင် pneumatic ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုမြှင့်တင်ရေးအပေါ်တစ်ဦး High-end နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Yantai ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိကျင်းပလိမ့်မည်ကို၎င်း, 7th နှင့် 2nd ကောင်စီအစည်းအဝေးတွေများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Xikou, Zhejiang ခရိုင်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ 2015 ခုနှစ်, pneumatic နည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း Fenghua, Zhejiang ခရိုင်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျယ်ဝန်းအစည်းအဝေးနှင့်ဌာနခွဲများ၏အမျိုးသားရေး pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Tiantai, Zhejiang ခရိုင်တွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ သတ္တမဒုတိယအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အစည်းအဝေးနှင့်ဌာနခွဲများ၏ pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ 2017 ခုနှစ်တွင် 2016 ခုနှစ် Fenghua, Zhejiang ခရိုင်တွင်ကျင်းပ, ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုနားလည်ရန် Hannover စက်မှု Exposition စောငျ့ရှောကျဖို့စည်းရုံးပါလိမ့်မည်, အဆင့်မြင့်သဘောတရားများနှင့်၏နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုခဲ့ကြသည် နိုင်ငံခြား pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်း။
အဆိုပါ Ningbo မှအဖွဲ့ချုပ်, Fenghua, Yueqing, Cixi, Jiaxing နှင့်အခြားဒေသများနှင့်အတူစက်မှုဇုန်ပြွတ်၏ဆောက်လုပ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
ကျွန်တော်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်အရှိန်မြှင့်ကောင်းစွာ pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်း၏စာပမြေားပြုအပေါင်းတို့နှင့်တကွလမ်းညွန်အတွက် pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်းများကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအားဝတျပွုသငျ့သညျ။
အဆိုပါတည်းဖြတ်မူအလုပ်ဖြည့်စွက်သည် "13 ငါးနှစ်အစီအစဉ်" compile နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကျန်းမာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပဲ့ပြင်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝယ်လိုအားအကြား docking မြှင့်တင်ရန်, pneumatic လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားတစ်ဦးတံတားဆောက်လော့။
multi ရုပ်သံလိုင်းလူသိရှင်ကြား, pneumatic ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဌာနခွဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုချဲ့ထွင်။
ကောင်စီ၏သတ္တမ session ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစဉ်အတွင်းအထွေထွေကောင်စီကအပျနှငျးထားသညျ့တာဝန်များကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ခဲ့ကြသည်, နှင့်ဆပ်ကော်မတီများကရေးဆွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအောင်မြင်စွာမပြည့်စုံခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲနေသောကောင်စီ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်, စက်မှုလုပ်ငန်းများခြုံငုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အရည်အသွေးအဆင့်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့ပြီး, နှင့်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုချဲ့ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာစဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရေးနှင့် "တရုတ် 2025 ခုနှစ်စေ" ၏သန်စွမ်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် "စက်အစားထိုး" နှင့်တကွ, pneumatic စက်မှုလုပ်ငန်းလှပတဲ့နွေဦးကြိုဆိုကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။